Weerarkii Pizza iyo Boosh oo la soo afjaray Daawo Sawirada.
Saraakiil ka tirsan Hay’addaha ammaanka Soomaaliya ayaa sheegay in la soo afjaray hawlgalkii saacadaha badan qaatay ee lagula dagaalamaayay xubno ka tirsanaa Shabaab, kuwaasi oo weerar abaabulan ku qaaday Maqaaxida Pizza House ee Degmada Hodan.
Dhimashada inta hadda la ogyahay waa 15 ruux, waxaana macquul ah in tirada intaasi ay ka badato, maadaama weerarka goor dhaw la soo afjaray oo meydad hor leh laga soo saaraayo dhismaha.
Gaadiidka gurmadka deg dega ah ayaa qaaday ku dhawaad 30 ruux oo dhaawacyo kala duwan uu ka soo gaaray weerarka, waxaana la geeyay Isbitaalada Magaalada Muqdisho ku yaal, halkaasi oo lagu dabiibaayo.
Sarkaal ka tirsan ciidamada NISA, ayaa sheegay in la toogtay dhamaan raggii Shabaabka ahaa ee weerarka soo qaaday, inkastoo Sarkaalkaasi uu ka gaabsaday shaacinta tirada dagaalyahanada weerarka soo qaaday.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya dableyda weerarka soo qaaday inay tiradooda u dhaxeysa Shan illaa Todobo ruux, laakiin Saraakiisha weli ma aysan shaacin.
« Nin Suuriyaan ah oo ku dhintay Weerarkii Muqdisho
Dagaal beeleed ka qarxay Degmada Mahaas Mar-kale. »